नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई भन्छन : सरकार भित्रैभित्रै कुहिएको फर्सी, ओली गफाडी ! — Motivatenews.Com
नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई भन्छन : सरकार भित्रैभित्रै कुहिएको फर्सी, ओली गफाडी !
कार्तिक १५, काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव गफाडी, अनुत्तरदायी एवं दम्भी देखिएको आरोप लगाएको छ। नयाँ शक्तिका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संघीय बैठकमा बुधबार पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
सरकार भित्रैभित्रै कुहिएको फर्सी बाहिरबाट राम्रो देखिएको जस्तो मात्र भएको पनि उनको भनाइ छ। ‘आफूलाई कम्युनिस्ट, सर्वहारावादी, जनवादी, गरिबमुखी, समाजवादी, साम्यवादी आदि भन्न रुचाउनेको पहिलो बहुमतको सरकार बन्दा केही हुन्छ कि भन्ने आशा सर्वसाधारणमा जाग्रित हुनु अस्वभाविक थिएन’, बाबुरामले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीलाई राम्रोसंग थाहा थियो कि यिनीहरु भित्रैभित्रै कुहिएको फर्सी बाहिरबाट सगल्तो देखिएका मात्र हुन्। यिनीहरुले जनसमुदायमा भ्रम छर्न र भोट प्राप्त गर्न सके पनि देशको दीर्घकालीन हित र भविष्यका लागि कुनै सार्थक योगदान गर्न सक्ने छैनन्।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।